'နိုင်ငံတော်ပွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲလို ပွဲကြီးမှာ ရွှေကြိုအနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက?? - Yangon Media Group
‘နိုင်ငံတော်ပွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲလို ပွဲကြီးမှာ ရွှေကြိုအနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက??
အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရတာ ဝါသနာမပါ ပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ဆန္ဒအရ အကယ်ဒမီရွှေကြို အဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သရုပ် ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ သဇင်ထူးမြင့်နှင့်တွေ့ဆုံကာ ယခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး-အကယ်ဒမီရွှေကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ တာကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-အကယ်ဒမီရွှေကြိုအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ပေးဖို့အတွက် ဦးရန်လေးက ဖေဖေ့ကို လာကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဖေဖေကလည်း ညီမကို မေးတယ်။ ရွှေကြိုအနေနဲ့ပါချင်လားဆိုပြီးတော့ အစက တော့ ငြင်းပါသေးတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ဖေဖေကလည်း ပါစေချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံတော်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲလို ပွဲကြီးမှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာက ပါဝင်ပေးဖို့ ပြောကတည်းက လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ရွှေကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်တာပါ။
ဖြေ-အနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့က ညီမဝါသနာမပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ရွှေကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဖို့ကို လက်ခံလိုက်တာလဲဆိုတော့ ညီမကအနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ပေမယ့်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်သလိုဖြစ်နေတာ။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဖေဖေ့ကိုသိနေကြတဲ့အခါကျတော့ ဖေဖေ့သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေက သိကြတယ်။ အားပေးကြတယ်။အဲဒီက နေပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်မိနေတာ။
မေး-ရွှေကြိုအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့က လမ်းပွင့်သွားတာဆိုတော့ နောက်ပိုင်းအနုပညာအလုပ်တွေရော လုပ်ဖြစ်မလား။
ဖြေ-ညီမက ဘာမှသိပ်မစဉ်းစားထားဘူး။ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခုရွှေကြိုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုး အရင်ကတည်းက ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့အတွက် လာကမ်းလှမ်းတာ တွေရှိပါတယ်။ ညီမဘက်ကမလုပ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဟိုတစ်လောက သူငယ်ချင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးတိုက်တစ်ခုက ဇာတ်ကား ရိုက်ဖို့အတွက်လာပြောထားတယ်။ အဲဒါလေးတော့ လက်ခံ ဖြစ်မလားမသိဘူး။ စဉ်းစားနေတုန်းပါပဲ။
မေး-အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကဝါသနာ မပါ ပေမယ့် မိဘတွေက လုပ်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းတာမျိုး ရောရှိလား။
ဖြေ-ဖေဖေက မတိုက်တွန်းပါဘူး။ လုပ်ချင်တာကိုပဲလုပ်ခိုင်း တယ်။ အတင်းကြီး ဟိုဟာလုပ်ပါ ဒီဟာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ ပြောလေ့မရှိဘူး။
မေး-ဝါသနာမပါပေမယ့်လည်း ကမ်းလှမ်းတာတွေရှိနေတော့ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်မလား။
ဖြေ-အရမ်းကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်က ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လည်း မဟုတ်တဲ့အခါကျ တော့ ငြင်းလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးလေးတွေ နည်းနည်း လောက်ပဲလက်ခံပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ညီမကလူကြောက်တတ်တယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် လူတောသိပ် မတိုးဘူး။ ပညာရေးဘက်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
မေး-အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်သွားမလဲ။
ဖြေ-အဓိကကတော့ ညီမ စီးပွားရေးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ စီးပွားရေးပဲလုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို နည်းနည်းချင်းစီလုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့များ ဒီဘက်ကိုစိတ်ယိုင်သွားမလား တော့ မသိဘူး။
ဟိသရိုး ၊ ဝါတာလူးနှင့် လန်ဒန်စီးတီးလေဆိပ်များတွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အထုပ်များ တွေ့ရှိ